Mpanamboatra Cup amin'ny fanandramana PET - Mpanamboatra sy mpamatsy Cup Tasting PET
Koban'ny plastika PET 3oz misy sarony
IRETO 3oz PET Kopa plastika misy sarony dia safidy mety indrindra amin'ny santionany, condiment ary ampahany. Na avelanao hanandrana labiera vaovao ny mpanjifanao na mizara santionan'ny tsindrin-tsakafo ianao amin'ny fampisehoana ara-barotra, ireo kaopy ireo dia mety indrindra hampahafantarana ny olona ny tsiro sy ny fomban'ny marikao.
Mety tsara amin'ny condiment, saosy, zava-pisotro ary santionany, ireto 3oz PET Kopa plastika misy sarony dia vita amin'ny akora namboarina. Ny akora PET ihany no akora ilaina amin'ireto kaopy fanandramana ireto. Mazava izy ireo ary afaka averina averina 100% amin'ny fampiasana faharoa.
Marika ireo 3oz PET Kopa plastika misy sarony, ny anaran'ny orinasao na ny sary famantarana ho an'ny marika tsy hay hadinoina fomba tsara hanaovana doka. Ny fanontana logo dia fomba tsara hampiroboroboana ny vokatrao ary ampahafantaro ny olona bebe kokoa ny marikao. Manolotra fanontana miavaka sy famolavolana. Amin'itytranga, fanampiana ny orinasanao hitahiry toerana ary hahazo izay ilainy hiasa amin'ny fomba mahomby.